'ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးတွေ မထွက်လာသေးတော့ Idol ရဲ့ အရိပ်အောက်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်' ငွေဇ? - Yangon Media Group
တစ်ကိုယ်တော်အခွေကို ဂီတအမျိုးအစားစုံလင်စွာနဲ့ထွက်ရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲက အဆိုတော် ငွေဇင်လှိုင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း..။
ဖြေ-လတ်တလောလုပ်ဖြစ်တာတွေကတော့ တစ်ကိုယ်တော်အခွေထွက်ဖို့အတွက် သီချင်းတွေတော့ အတီးပိုင်းတွေလုပ်ဖြစ် နေတယ်။ ကြားထဲမှာတော့ နယ်ပွဲတွေ အများကြီးဆိုဖြစ်နေပါတယ်။ အများဆုံးသွားဖြစ်တာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကို အများဆုံးပိုသွားဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနယ်တွေလည်း အများကြီးသွားရပါတယ်။
ဖြေ-အခွေကတော့ ကြာနေတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ညီမတို့က ဖြိုးမြတ်အောင်ထွက်ပြီးတော့မှ ထွက်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ ကြားထဲမှာ တော့ Shwe FM9နှစ်ပြည့် အခွေကတော့လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။
ဖြေ-ကိုယ့်သီချင်းလေးတွေကိုလည်း နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဆိုဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက ပြိုင်ပွဲတုန်းကဆိုတဲ့သီချင်း တွေ ပိုတောင်းတာများပါတယ်။
မေး-အခုပြိုင်ပွဲတွေသွားရင်ရော ကိုယ့်ကို ငွေဇင်လှိုင်းဆိုတာထက် Idol က အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် သိကြတာနဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့ရော ဘယ်လိုပြောချင်လဲ။
ဖြေ-အခုကတော့ ငွေဇင်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေက ကိုယ်တွေကိုတွဲပြီးတော့မြင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်တွေပိုပြီးတော့ ကြိုးစားရမယ်။ ပွဲကနေတက်လာလို့လည်းကိုယ်တွေကိုပရိသတ်က သိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂီတသမားတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့သီချင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးတွေ မထွက်လာသေးတော့ Idol ရဲ့ အရိပ်အောက်မှာပဲ ရှိပါ သေးတယ်။ ငွေဇင်တို့ အားလုံးထဲမှာမှ မဆိုဖီယာကို အရမ်းအားကျတယ်။ သူဆိုရင် ပြိုင်ပွဲရဲ့အရိပ်ကမရှိတော့ဘဲ သူရဲ့နာမည်နဲ့ရပ်တည်တာကို အရမ်းအားကျပါတယ်။
မေး-တစ်ကိုယ်တော်အခွေမှာရော သီချင်းလေးတွေကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး လေးတွေ လုပ်ထားလဲ။
ဖြေ-အခုလောလောဆယ် သီချင်းတွေစဉ်းစားထားတာကတော့ သီချင်းအမျိုးအစား အစုံကိုထည့်ချင်တယ်။ ကိုယ်အားသန်တဲ့ Jazz လေးတွေ၊ Blues လေးတွေလည်း ထည့်ချင်တယ်။ အခွေအတွက်အခုလောလောဆယ် စဉ်းစားထားတာကတော့ Mini Album အတွက် အကောင်းဆုံးသီချင်း ခြောက်ပုဒ်လောက်ပဲ စဉ်းစားထားတယ်။ အချိန်လည်းနည်းနည်း ကြာနိုင်တယ်။ သီချင်းကတော့ ၁၂ ပုဒ်လောက်ရှိပါတယ်။ ပြန် ရွေးမှာပါ။ သီချင်းလေးတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်လည်းတင်မယ်။ အကုန် တော့ မတင်ပါဘူး။ MTV လည်းရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။
မေး- Idol နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ-စာချုပ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တချို့ကထင် နေတာက ကိုယ်ရတာကို ရာခိုင်နှုန်းအများကြီး သွင်းရတယ်ထင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ သူ့ Level နဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ငွေဇင်တို့ဆိုရင် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းပဲသွင်းရပါတယ်။ ငွေဇင်တို့စစချင်း Idol တစ် ယောက်အဖြစ် စာရင်းဝင်သွားပြီ ဆိုကတည်းက စပြီးတော့ စာချုပ်ချုပ်ထားရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရတဲ့ သူကတော့ စာချုပ်ကသုံးနှစ်နဲ့အနုပညာကြေး ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းကိုသွင်းရတယ်။ ဒုတိယနဲ့တတိယကတော့ နှစ်နှစ်စီ၊ အနုပညာကြေးသွင်းရတာကတော့ ဒုတိယရတဲ့သူက ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ နောက်တတိယကနေ Top 11 အထိကတော့ ၁ဝ ရာခိုင် နှုန်းသွင်းရပါတယ်။
''အကယ်ဒမီ ရသွားတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်ထက်တော်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ ချမှတ်ထာ??
အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် အရေးကြီးအဆို တိုင်းရင်းသားပါတီများ ထော?
လတ်တလော ရပ်ဆိုင်းထားသော နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံများကို အမြန်အကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အဆို ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ဆွေးနွေးမည်